पहिलो दिनमा नै सचिवको खेलमा यसरी फसे नयाँ मन्त्रीहरु ! | News Dabali
पहिलो दिनमा नै सचिवको खेलमा यसरी फसे नयाँ मन्त्रीहरु !
July 31, 2017 | 6:35 am
काठमाडौं । १२ साउन २०७४ मा पशुपक्षीं विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि सन्तकुमार थारू साँझसाढे ६ बजेपछि मन्त्रालयपुगे । पद वाहली गरे लगत्तै सचिवयुवनध्वजजिसीले एउटा फाइल अगाडी बढाए मन्त्रीथारुले सोध्दैनसोधी हस्ताक्षर गरे । नव नियुक्त मन्त्रीले पदवाहली गरे लगत्तै एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पञ्चायतका लदेखि हुँदै आएको हो । तर हरेक मन्त्रिपरिषदमा कुनै न कुनै मन्त्रीले भने फाइलमा हस्ताक्षर नगरि निणर्य होल्ड गर्ने गरेका छन् । यस पटकपनि केही मन्त्रीले त्यसै गरे ।
नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै आफु अनुकुलको निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने र त्यो निर्णय पहिला नै कुनै पृष्ठिभूमीमा तयार हुने गर्छ । बाठा सचिवहरुले आफु अनुकूलको निर्णय गराउने गर्छन । पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिवले यसपटक त्यसै गरे । सचिव जिसीले चारजना पूर्व सचिवहरुलाई जागिर दिने एउटा निर्णयमा मन्त्रीलाई हस्ताक्षर गराएका छन् ।सचिवले मन्त्री जिसीले मन्त्री थारूलाई मन्त्रालयको सल्लाहकारमा पूर्वसचिवहरू चार जनालाई नियुक्तिगर्ने फाइल सदर गराउनभ्याए। स्रोतका अनुसार त्यो निर्णय गराउने विषयमा यसअघि नै लामो छलफल हुँदै आएको थियो । सल्लाहकारमा पूर्वसचिवहरू डा. कृष्णचन्द्र पौडेल, डा. अन्नपूर्णनन्द दास, उत्तमकुमार भट्टराई र उदयचन्द्र ठाकुरलाई नियुक्त गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै पूर्वसचिवहरु चरजनालाई नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
उनीहरूलाई मन्त्रालयको योजना निर्माणमा सुझाबदिने भूमिका तोकिएको छ । चारैजना यसअघि त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाथिए । पौडेल पहिलो सचिव, दास दोस्रो र भट्टराई मन्त्रालयको तेस्रो सचिवका रुपमा जिम्मेवारीमा रहेकाथिए । ठाकुर यसअघि पशुपक्षी मन्त्रालयको सहसचिव, कृषि मन्त्रालयमा प्रवक्ताका रुपमा जिम्मेवारीमा रहेकाथिए । मन्त्रीले गरेको पसहिलो निर्णय अहिले विवादमा तानिएको छ । एउटा सानो मन्त्रालयमा चार–चार जना सल्लाहकारको आवश्यकता किन ? पूर्व सचिव चारजना नै एउटै मन्त्रालयमा सल्लाहकार किन? सल्लाहारको हैसियतमा रहेकाले उनीहरुको सेवा सेविधा के हुने ? सल्लाहकारको पदावधी, तिनले पाउने सुविधा आदिका नयाँ मन्त्रीले सोचे की सोचनन ? यसमा छलफल सुरु भएको छ ।
तर मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी डा प्रदीवचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले चार किसिमको सल्लाहकार समुह गठन गरेको र त्यो मन्त्रीपूर्व सचिवहरु रहेको सल्लाहकार समुह तेस्रो नम्बरको रहेको बताए । उनीहरुले सल्लाहकार समुहको बैठक बसे बापत भत्तापाउने तर पारिश्रमिक नपाउने उनले जानकारी दिए । ‘पशु र वाताबरण विज्ञका हैसियतले उहाँहरुलाई सल्लाहकार समुहमा राखिएको हो ’ भट्टराईले नेपालपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालय आबश्यक ठानेका बेलाजुनसुकै समयमा र नभए नियमित बैठकमा उहाँहरुले सल्लाह दिनुहुनेछ नियमित कार्यालयमाआउनेगरि र तलब दिनेगरि राखिएको होइन । ’ विज्ञहरुले भने जुनसुकै प्रयोजनका लागि सल्लाहकार समुह बनाए पनि बुझ्दै नबुझी हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको बताए । मन्त्री थारुले त्यो सल्लाहकार समुह यसअघि नै गठन गर्नेगरि प्रक्रियामा रहेको र त्यसको आशय ठीर्कै लागेर हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले त्यसले गलत उद्देश्यको राखेको भए आफुले सल्लाहकार समुह नै भंग गर्ने दावी गरे । ‘सचिवको ब्रिफिङ अनुसार मैले राम्रै लागेर सल्लाहकार समुहको निर्णय गरेको हुँ’मन्त्रीथारुले भने, ‘मलाई जे बुझाई त्यसको भित्रकुनै गलत आशय भए नभएको तपाईले भनेपछि बुझ्नेछु र गलत भए भंगपनि गर्न सकिनेछ । ’
पदवाही गरेको दिन कर्मचारीले मन्त्रालय स्थापना हुँदा लिइएको एक वर्षमा अन्डा, दुई वर्षमा मासु र तीन वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएकाथिए । पदवाहली काक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानु नबुझेका वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले कुनै फाइल सदर गरेनन् ।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पनि रक्षासचिवले प्रतिरक्षा रणनीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यदलको सकिएको म्याददुई महिनाथप्ने निर्णय सदर गरेकाथिए । छोटो अवधि रक्षा मन्त्रालयको सचिवमा रहँदा विवादमा परेर अन्यत्र सरुवा गरिएका पूर्वसचिव माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्यादसकिएको थियो । मन्त्रीले कार्यदलले किन काम गरेन भनेरबुझदै नबुझि हस्ताक्षर गरेकाथिए ।